‘साहित्यको बजार घटेको छ’ बासुदेव अधिकारी, साहित्यकार
जनतापाटी शनिबार, असोज २४, २०७७ मा प्रकाशित
नेपाल राष्ट्र वैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका बासुदेव अधिकारी अहिले देशको जेठो वैंक नेपाल वैंक लिमिटेडको अध्यक्ष छन् । यस अघि समयका स्वरहरु(कविता सङ्ग्रह), मनको हरियो मनको गीत (गीत गजल सङ्ग्रह), आफन्तलाई सम्बोधन (कविता सङ्ग्रह), युरोस्पर्श (कविता सङ्ग्रह) गायब सभामुख (कविता सङ्ग्रह) र बस्तीमा आगो (कविता सङ्ग्रह) र, च्यातिएको शब्दकोष (कविता सङ्ग्रह) प्रकाशित गरेका अधिकारीले कोरोना महामारी शुरु भएपछि लेखेका विभिन्न कविताहरुको संग्रह ‘वस्तीमा आगो’ हालसालै प्रकाशित भएको छ । प्रस्तुत छ–वैंकर अधिकारीसंगको साहित्यिक वार्ताः
लक डाउनको समयमै कविता संग्रह निकाल्नु भयो, सबै कविताहरु कोरानाकाल कै होलान होइन ?
-विगतमा अलि अराजक पाराले फुक्काफाल भएर चलिन्थ्यो । कोरोना महामारी पछि शुरु भएको लक डाउनले पुरै अनुशासित बनायो । त्यहिबेलामा सृजना गरेका ६१ वटा कविताहरुलाई समावेश गरेर यो संग्रह निकालेको हुं ।
किताब त निकाल्नु भयो, मार्केटिङ चांही कसरी गरिरहनु भएको छ ?
-प्रकाशक साथीहरुले गरिरहनु भएको छ । किताब निस्कदां लक डाउन उत्कर्षमा थियो, त्यसैले शुरुमा त केही गर्नै सकिएन । अहिले चांही पाठकहरु समक्ष पुर्याउने काम भैरहेको छ ।
पुस्तक निकाल्नु भनेको लेखक भोकै मर्ने र प्रकाशकहरु मोटाउने काम हो भनिन्छ, तपाईको अनुभव के छ ?
-ठूला प्रकाशकहरुको हकमा त्यस्तो कुरा लागू हुन्छ भन्ने सुनिएको छ, देखिएको पनि छ । त्यसैले मेरो पुस्तक प्रकाशन गर्ने साथीहरु ठूला भन्दा पनि कामकाजी खालको हुनुहुन्छ । त्यसैले अहिलेसम्म त्यस्तो समस्या भोग्नु परेको छैन ।
साहित्यीक पुस्तकहरुको बजार त ठप्पै छ नी, होइन ?
-साहित्यीक त्यसमा पनि गैरआख्यान साहित्यको बजार अहिले खासै छैन । आख्यानसंग सम्वन्धित पुस्तकहरुको बजार ठिकै ठिकै छ । त्यसैले धेरै साहित्यकारहरु आख्यानतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
देवकोटा, लेखनाथ, माधव घिमिरेदेखि भूपी शेरचनहरुसम्मका कविता कृतिहरु ठूलो संख्यामा विक्री हुने तर अहिलेका साहित्यकारहरुको कृति विक्री नहुनुको कारण के हो ? लेखनकलाको गुणस्तरमा रहेको कमीले गर्दा त्यस्तो भएको हो कि यसमा पाठकको पनि दोष देख्नुहुन्छ ?
-देवकोटा, लेखनाथ, माधव घिमिरे, भूपी शेरचनहरु त वाङमय पुरुष हुनु भयो । उहांहरुसंग तुलना गर्न मिल्दैन । तर, लेखनकला सुधार गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा असहमती जनाउनु पर्ने कारण देख्दिन ।
राष्ट्र वैंकको हाकिम वा अहिले नेपाल वैंकको अध्यक्ष हुन सजिलो कि कविता लेख्न ?
-दुवै चुनौतिपूर्ण काम हो । उदाहरणीय हाकिम हुन पनि गाह्रो काम हो । पाठकले मन पराउने लेखक हुनु पनि गाह्रो काम हो । राष्ट्र वैंकमा कार्यरत रहंदा वा अहिले नेपाल वैंकको नेतृत्व गर्दा फरक खालको चुनौति हुन्छ । आफ्नो पेशागत मूल्य मान्यतामा अडिग रहेर काम सफल हुन पनि निकै ठूलो चुनौति रहन्छ । राम्रो साहित्य लेख्नु पनि सजिलो काम होइन ।
तपाई लेखक राम्रो कि वैंकर ?
-दुवै क्षेत्रमा आफूलाई मध्यम ठान्छु । कत्तिको सफल हुं भन्नु भन्दा पनि म कुनै पनि क्षेत्रमा आफूलाई गैर जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत गर्दिन । हरेक बेला आफ्नो जिम्मेवारी प्रति सचेत रहने गरेको छु ।
यी हुन् अफगानिस्तानमा तालिवानले लगाएका पाँच अनौठा प्रतिबन्ध २८ मिनेट पहिले